Fa maninona no mividy iPad fa tsy tablette hafa? | Vaovao IPhone
Fa maninona no mividy iPad fa tsy tablette hafa?
Vaovao IPad | | iOS 7, iPad Air
Ny takelaka dia, aorian'ny finday avo lenta, no fitaovana nampitombo ny isan'ny mpampiasa tato ho ato. Hatramin'ny nanombohan'ny Apple ny maodely iPad voalohany, notsikerain'ny maro tamin'izany fotoana izany noho ny fiheverana azy ireo ho "tadiaviko ary tsy azoko", ny hazakazakan'ireo mpanamboatra hahazo ny "iPad Killer" izay hamaha ny takelaka Apple dia mbola mitohy, ary ny tolotra ankehitriny dia tena isan-karazany, ary miaraka amin'ny takelaka lehibe afaka mijoro amin'ny Apple iPad tsy misy olana. Fa,maninona no mividy iPad raha misy takelaka takatry ny vidiny hafa iza no afaka "manolotra mitovy"? Hiezaka hamintina izany amin'ny lahatsoratra iray aho.
1 Kalitao ambony sy famolavolana
2 Hery lehibe sy fahaleovan-tena ambony
3 App Store, fivarotana fampiharana ho an'ny iPad tsy misy hafa
4 iOS 7, rafitra fiasa finday vaovao
5 Mety hitranga Multimedia tsy voafetra
6 Tsy olana ny famokarana
7 Ecosystem iray an'ny azy manokana
8 Misy ihany koa ny lesoka
Kalitao ambony sy famolavolana
Rehefa miresaka momba ny fitaovana teknolojia isika dia mijery foana ny processeur, RAM, GPU, sensor, bateria ... Fa ny lafiny ivelany dia zavatra ifotoran'ny, farafaharatsiny mba ahy. Ary amin'ity iPad ity dia, amin'izao fotoana izao, tsy mitovy. Ny farany dia mahavariana fotsiny, ary amin'ny endriny vaovao an'ny iPad Air dia nihatsara bebe kokoa. Sarotra ny maka sary an-tsaina fa ny fitaovana iray manana lanja sy hateviny dia mety hipetrahan'ny fahefana sy fahaleovan-tena be loatra. Ny fonosana lamosina alimina dia porofon'ny kalitaon'ny fitaovana vita amin'ny iPad.
Hery lehibe sy fahaleovan-tena ambony
Mifanaraka amina mpandrindra A7 vaovao, ny herin'ny iPad Air dia ambony noho ny an'ny takelaka hafa eny an-tsena ankehitriny. Izany dia tsy maintsy ampiana rafi-pandidiana finday natao ho azy manokana, izay manararaotra manararaotra ny fahafaha-manolotra azy. iOS 7 dia nitondra fiasa vaovao vitsivitsy ary koa fanovana kosmetika lehibe. Mahatalanjona ny zava-bitany amin'ny iPad Air, ary miseho izany rehefa milalao lalao mitaky na milalao sarimihetsika FullHD isika. Ary izany rehetra izany nefa tsy mila miahiahy momba ny famoahana azy, satria mahazaka andro iray ampiasana mafy tsy misy olana.
App Store, fivarotana fampiharana ho an'ny iPad tsy misy hafa
Tsy dia misy azo lazaina momba ny App Store, fivarotana fampiharana lehibe indrindra misy ankehitriny. Google Play dia nitombo be, haingana kokoa noho ny App Store tato anatin'ny taona vitsivitsy, nefa ny fivarotana Android dia toa tsy dia miraharaha loatra ireo rindranasa natao ho an'ny takelaka misy azy ireo, ary tokony hipetraka amin'ireo rindranasa natao ho an'ny efijery finday avo lenta izy ireo ., tsy takelaka. Ny App Store dia misy fampiharana 475.000 novaina ho an'ny efijery iPad, amin'ireo olona marobe dia azo antoka fa hahita ilay ilainao ianao.
Mpampiasa serivisy Google ve ianao? Tsy misy olana, satria ny goavam-be amin'ny Internet dia namolavola fampiharana ny serivisy rehetra ho an'ny iOS, misy aza ny mifanohitra amin'izany fa ny sasany amin'izy ireo dia nohavaozina tamin'ny fanatsarana teo aloha tao amin'ny iOS noho ny amin'ny Android.
iOS 7, rafitra fiasa finday vaovao
iOS 7 dia nanaitra ny fitiavana sy ny fankahalany. Ny fanovana estetika ny rafitra dia tsy tian'ny olona rehetra, fa ny fiasa vaovao kosa dia fanatsarana tsy misy fisalasalana. Ny Center Control, ireo fiasa vaovao amin'ny fampifanarahana lakile sy angona fidirana hafa, FaceTime, iMessage, iCloud, AirDrop, Siri ... dia asa izay azonao atao amin'ny Internet ihany no ankafizinao. Ary izany rehetra izany dia miorina amin'ny fitoniana sy fahombiazan'ny iOS. Ary koa, miaraka amin'ny fitaovana Apple vaovao fantatrao izany mandritra ny taona maro dia ho afaka mankafy ny fanavaozana ny rafitra fiasao ianao, maimaimpoana ary ho an'ny rehetra miaraka.
Mety hitranga Multimedia tsy voafetra
Amin'ny alàlan'ny fanananao fitaovana iOS dia azonao idirana amin'ny fivarotana iTunes, fivarotana atiny multimedia lehibe indrindra eto an-tany. Sarimihetsika, tantara mitohy, mozika, boky ... rehetra eny an-tànanao. Tsy te hampiasa serivisy Apple hankafizanao atiny multimedia ve ianao? Tsy misy olana, misy fampiharana tsy tambo isaina mamela anao hilalao horonantsary amin'ny endrika rehetra, ao anatin'izany ny .mkv na .avi, ary mampifandray amin'ireo mpizara UPnP sy stream.
IOS dia "ampangaina" foana tsy afaka milalao horonantsary avy amin'ny tranonkala sasany, noho ny tsy fisian'ireo endrika mifanentana (toy ny flash ohatra). Soa ihany fa tsy olana intsony io, ary misy ny rindranasa mamela anao hankafy ireo horonan-tsary nakarina tamina tranonkala tsy nisy olana.
Tsy olana ny famokarana
¿Te hampiasa ny iPad-nao ianao hiasa? Tsisy olana. Ny fampifanarahana amin'ny alàlan'ny iCloud dia ahafahanao miasa miaraka amin'ireo antontan-taratasy na aiza na aiza. Raha manana Mac, iPhone na iPad ianao dia ho afaka hiditra amin'ilay rakitra avy amin'izy ireo, fa raha tsy izany dia tsy olana izany, satria avy amin'ny iCloud.com azonao atao ny miditra amin'izy ireo ary miasa amin'izy ireo, ianao mila solosaina misy fidirana amin'ny internet ihany. Fantatrao koa fa ny fitaovana iOS novidiana rehetra nanomboka ny 1 septambra dia afaka misintona ny fangatahana iWork sy iLife maimaim-poana.
Ecosystem iray an'ny azy manokana
Ny fitaovana Apple rehetra dia manana ny ecosystem-n'ny accessories misy eo am-pelatanany. Mijoro, mandrakotra, kitendry, kapila mafy Wifi ... na teleskaopy, mizana na mpanara-maso ny tosidra aza dia hita ao amin'ny Apple Store. Fiadanan-tsaina izany, na dia mazava ho azy aza, amin'ny ankamaroan'ny tranga dia tsy maintsy atao izany mandoa vidiny lafo ho azy ireo.
Misy ihany koa ny lesoka
Mazava ho azy fa misy teboka ratsy. Raha iray amin'ireo mila mahay mampiditra fahatsiarovan-tena USB na microSD ao anaty takelakao ianao, na ireo izay te-hisintona mozika amin'ny tranokala rehetra ary manamboatra ny endrik'ilay takelakao, ny iPad dia tsy ilay fitaovana tadiavinao . Mametraka fetra sasany amin'ny rafitra fiasa sy ny fitaovany i Apple, ary mety tsy sitraky ny mpampiasa sasany izany. Araka ny nolazaiko tany am-piandohana, goavana ny isan'ireo takelaka misy eny an-tsena, ary ny kalitaon'ny kinova Android farany sy ny sasany amin'ireo takelaka misy azy ireo dia mampitaha azy ireo amin'ny iPad an'ny Apple. Ary aza adino ny vidiny ho teboka ratsy.
Ireo no antony, mety mizara ny sasany (na maro) amin'izy ireo ianao, na mety tsy hanaiky ny hevitro ianao. Raha te-haneho ny anao ianao, fanajana ny an'ny hafa, tongasoa eto ny hevitrao eto.
Fampahalalana bebe kokoa - Ny benchmarks voalohany amin'ny iPad Air dia mampiseho fampisehoana 90% bebe kokoa noho ny iPad 4, Video Explorer: milalao horonantsary avy amin'ny tranonkala rehetra. Raisinay lisansa 3.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Fa maninona no mividy iPad fa tsy tablette hafa?
Lynda dia hoy izy:
Tena tsara, te hahita ny fampiharana havaozina ho 64 bits tsy ho ela ao amin'ny fivarotana app izahay, na dia araka ny voalaza aza fa iOS 7 dia bateria mandany zavatra very saina.
Mamaly an'i lynda
Eny, tsy fantatro hoe hanao ahoana izany amin'ny iPad Air na amin'ny iPhone, saingy manana iPad generasi fahaefatra miaraka amin'ny iOS 7.0.3 aho ary ny marina dia namboarina toy ny nataoko tao amin'ny iOS 6, tsy dia hitako loatra ny fahasamihafana amin'ny fanjifana bateria
Voalamina tsara, tsy tsikaritro ny fahasamihafana eo amin'ny fanjifana amin'ireo fitaovako amin'ny iOS 7.
Fampiharana ho an'ny Android dia hoy izy:
Tsy misalasala aho fa mety be ho an'ny olona maro ny endriny; Raha ny marina dia tsy nanandrana ipad aho, azo antoka fa hanana fotoana mety aho, fa marim-pototra mandraka ankehitriny dia afa-po amin'ny kinova android mitondra ireto fitaovana ireto (takelaka) ianao.
Mamaly amin'ny Apps For Android
Tiako ilay lahatsoratra, toa misy tanjona io ary heveriko fa tsara fa nampiditra ny lafy ratsy ihany koa ianao raha misy olona te-hividy iPad ary tsy dia mazava loatra momba azy io, hahafahan'izy ireo mandanja ny lafy sy lafy 🙂
Fa maninona no mividy ipad? Tsotra satria izay rehetra amboarin'i Apple dia heverina ho milimetatra ary tsy toy ny marika hafa izay manao takelaka sy finday smartphone hatao.
Zafikelin'i Peña dia hoy izy:
Nirefy milimetatra ny eritreritra ka tsy ahafahanao mamindra rakitra amin'ny alàlan'ny USB, lahatahiry feno avy amin'ny solosaina mankany amin'ny takelaka ohatra. Ny tsy fanananao mpikaroka rakitra anatiny sy folder. Tsy manana fanohanana nfc ianao. Izay tsy anananao fanohanana usb otg. Izay tsy anananao fanohanana karatra sd. Izany rehetra izany dia ny hanereny anao hividy takelaka mitaky fifandraisana maharitra amin'ireo tamba-jotra finday ary manery anao hanana fifanarahana amin'ireo orinasan-telefaona izy ireo.
Valiny tamin'i Peña Nieto
Tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana amin'ireo orinasan-telefaona aho. Na ny iPad roa nataoko dia tsy misy fifandraisana 3G, ary manome toky anao aho fa mahazo tombony betsaka amin'izy ireo.
Mikasika ny bateria dia avela havela be i Apple ..., tsy afaka namaha izany olana lehibe izany
Olana bateria IPad? iza amin'ireo?
Apple dia mampitombo ny hafainganam-pandehan'ny processeur, manatsara ny efijery, mampitombo ny fitehirizana, manao fakan-tsary faran'izay ambony.
Fa ny bateria dia mbola fiainana mitovy ihany.
Heveriko fa izany indrindra no tsara: hery bebe kokoa, efijery bebe kokoa, habe kely kokoa, manify, maivana ary bateria iray ihany.
Tsy haiko raha lalànan'ny fizika na tsia, fa arakaraka ny herin'ny herinaratra, ny fanjifana angovo bebe kokoa, raha ny fahitana ny efijery dia ilaina ny fanjifana bateria lehibe kokoa, tsy haiko raha manana patanty ireto Apple ireto izay mandrakizay ny bateria, fa izany dia ahafahantsika miaina indray andro isan'andro
Hey mb ny ezahiny lazaina aminao dia ny paoma manamboatra ny fitaovana ho manify, miaraka amin'ny efijery tsara kokoa, manana hery bebe kokoa, kely kokoa sy maivana kokoa, mbola manana ny androm-piainany ihany. Mety ho ara-dalàna ny tohan-kevitrao raha toa ka nampihena ny androm-piainany ny ipad isaky ny taranaka
Ny ipad dia mety ho jailbroken ary mametraka zavatra kely ianao ary mahatalanjona ny vokany
Manuel AF dia hoy izy:
Buenas tardes. Novakiako ny hevitrao ary toa mifanaraka izy ireo, heveriko fa tena manam-pahalalana momba ny fitaovana paoma ianao. Izany no antony anoratako aminao mba hanontany anao ny tolo-kevitra iray momba ny ipad hovidiko, ny rivotra, ny mini misy efijery retina ..., na ilay mini tsy misy efijery retina.
Tsy dia lehibe ny fitakiako. Ny fotony dia ho tena fototra, mijery sarimihetsika, Internet, sary ary zavatra hafa kely. Eo anelanelan'ny ipad Air na ny mini misy retina efijery aho, na ahoana na ahoana ny 64G. wifi tsy misy finday. Ahoana ny hevitrao? Misaotra mialoha, ary arahaba indrindra
Valiny tamin'i Manuel AF
Ary nivoaka ny jailbreak ho an'ny ios7
Eny, ny hevitro dia mahasoa anao hatramin'ny nahazoako ary manana ipad 3 sy takelaka iray. (Rivotra efa niasa sy 4 ihany no amporisihiko ankehitriny dia amporisihiko ny efijery mini retina.
Tena ahazoana aina sy azo ampiharina ho an'ny olona izay tsy manantena fahombiazana miavaka koa. Manana ny mini mahazatra aho tsy misy efijery retina ary mahita reniko
Vao nividy iPad Air aho ary tiako io, manana mini sy 4 koa aho, ka fantatro ny tiako holazaina rehefa miteny aho fa mahavariana ny iPad Air
Apple dia manavao ny fampiharana Remote ho an'ny iOS 7
iQi Mobile, ny charger tsy misy tariby ho an'ny iPhone